Iindaba -I-BMW 3 Series ye-crystal gear gear lever?
Oko kwasungulwa iimodeli ze-BMW kunye nekhowudi ye-G chassis, amaqhosha adityanisiwe kwindawo etshintshayo, isizisela izimvo ezininzi. Ukudityaniswa kwesiqalo seqhosha elinye, ukuqala okuzenzekelayo kokuqalisa, imo yokuqhuba, kunye nebhuleki yesandla yombane inamandla ngakumbi kwitekhnoloji kwindawo yokutshintsha.
Kodwa kule ndawo, eyona nto isinika eyona mpembelelo ibonakalayo yikristale yegiya ye-elektroniki efana ne-crystal, efanelekileyo kwaye igcwele iteknoloji. Ungayifumana "i-crystal gear lever" kwi-8 Series, X5, kunye ne-X6. Ingaphakathi le-BMW 3 Series entsha ixhotyiswe nge-lever emnyama ye-elektroniki. UMankaleilab uyawaqonda kakuhle amathuba oshishino kwaye uphuhlise iseti yokutshintsha okufana nekristale yezixhobo ezifanayo, ezibhalwe "3" ngaphakathi, nto leyo ifana ncam noyilo lwe-lever shift ye-8 uthotho. Ndiyathemba ukuba i-BMW iya kuvelisa iindawo ezintle endaweni yazo, kwaye abanini bemoto baya kuhlala bonwabela iindawo ezifanelekileyo.